Intel invents ihe ngwa anya USB na-ekwe nkwa 1.6Tbps - News Ọchịchị
Intel invents ihe ngwa anya USB na-ekwe nkwa 1.6Tbps
CHIPMAKER Intel azụlitewo ihe 800Gbps ngwa anya USB na ọ sịrị ga-enye nnukwu ọsọ na-abawanye na supercomputers na data emmepe mgbe ọ ulo oru na nkera nke abụọ nke afọ.
N'ikwupụta ihe ubi ahụ ngwa anya Fibre Conference na San Francisco, Intel kwuru ọ dabeere na ya sịlịkọn photonics Diisk technology, na nwere nkwado nke a ọnụ ọgụgụ nke egwuregwu na ngwa anya ụlọ ọrụ, gụnyere Corning, US Conec, TE Njikọta, Molex na ndị ọzọ.
The chipmaker akpọ ya MXC nchọ technology, nke ezubere ka a na-eri-irè ngwa anya Diisk n'ime data emmepe.
MXC, nke Intel ulo oru afọ gara aga, bụ kọmpat Diisk na-akwado ihe ruru 64 eriri, onye ọ bụla na-ebu ruo 25Gbps nke data maka a ngụkọta 1.6Tbps bandwit n'elu anya ruo 300m. Ọ e mepụtara na mmekorita ya na Corning, nke na-enye ndị Clearcurve ngwa anya eriri e na-kpudo gburugburu tighter akụkụ ka omenala emep uta eri.
The technology bụ akụkụ nke Intel si ọzọ ọgbọ data center igba dubbed ogbe n'ọtụtụ na Architecture, nke Aims disaggregate onye na sava n'ime ọdọ mmiri nke compute, nchekwa na ebe nchekwa na ogbe larịị, na sịlịkọn photonics eji maka Njikọta ma n'ime ma n'etiti racks.
Na a post on Intel si Data Stack blog, na ike kwukwara na Microsoft abaala ya MXC adopters Forum.
Microsoft na n'ozuzu njikwa nke Cloud Server Engineering, naanị Kushagra, kwuru na MXC technology ga- “instrumental” n'ịkpụzi ọzọ ọgbọ elu-arụmọrụ data center architectures.
“Anyị na-atụ anya na-arụ ọrụ na Intel na-emeghe ụkpụrụ ozu dị ka OCP ka mee ngwangwa ọmụma-nkekọrịta na ụlọ ọrụ doo,” o kwuru, sị.
Isi eji ikpe maka MXC cables agụnye ngwa ngwa jikọrọ n'elu-of-ogbe switches na isi switches, na n'ihi na njikọ na sava ka mmezi nchekwa ma ọ bụ GPUs, Intel kwuru.
21648	0 Clearcurve, Corning, data center, Intel, Microsoft, Molex, MXC, TE Njikọta
← 20 Irè Home ịgba akwụkwọ maka aza Ụkwụ Isii Indian n'ụgbọ mmiri gbapụ na search maka Malaysian ụgbọelu →